के तपाई तौल बढेर तनावमा हुनुहुन्छ ? यसरी घरमै घटाउन सकिन्छ तौल
निशान न्युज माघ २५, 2075
काठमाडाैं । आजकल अधिकांश मानिसमा मोटोपनाको समस्या देखिन्छ । शारीरिक व्यायामको कमी, असन्तुलित खानपान र गलत जीवनशैलीका कारण यस्तो समस्या बढिरहेको पाइन्छ । तौल घटाउन भन्दै विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा जिम सेन्टर धाउने चलन छ । व्यस्त मानिसका लागि दैनिक जिम जानु झन्झटिलो पनि हुन सक्छ भने कतिपयका लागि खर्चिलो । यसर्थ, कुनै मेसिनको प्रयोगविना घरमै बसी–बसी पनि जिममा गरिने विभिन्न अभ्यास गर्न सकिन्छ । यस्ता अभ्यास, जसले फिटनेस कायम गर्न मद्दत गर्छन् ।
वार्मअप : हल्का जगिङसहित गरिने अभ्यास वार्मअप हो । यसमा जिउ तथा हातखुट्टा तन्काएर अभ्यास गरिन्छ । जसलाई स्टेचिङ भनिन्छ । यो अभ्यास करिब १० मिनेटसम्म गर्दा राम्रो हुन्छ ।
बुट क्याम्प : बुट क्याम्प एक किसिमको कार्डियो अभ्यास हो । उभिएर खुट्टा फट्टाउने अनि हात तल–माथि गरेर यो अभ्यास गरिन्छ । यसका तीन चरण हुन्छन् । प्रत्येक चरणमा ३० चोटि अभ्यास गरेर मोटोपना नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ ।
माउन्टेन क्लाइम्बिङ : हिमाल वा पहाड चढ्दा जसरी नै गरिने क्रियाकलापलाई माउन्टेन क्लाइम्बिङ भनिन्छ । यसमा भुइँमा खुट्टा राखेर जम्प गरिन्छ । यो एकैपटकमा २० देखि ३० चोटिसम्म गर्न सकिन्छ ।
क्वाट जम्प : स्कोट जम्प उठबस गरेर हलुका किसिमले गरिन्छ । यो अभ्यास एक चरणमा २० पटक गर्न सकिन्छ ।
बर्पी :हात भुइँमा टेकेर खुट्टालाई अगाडि–पछाडि वा तल–माथि जम्प गरेर गरिने अभ्यास बर्र्पी हो । यो अभ्यास एक चरणमा २० देखि ३० पटकसम्म गर्न सकिन्छ ।पेट घटाउने अभ्यास
- हात कुहिनासम्म र खुट्टाको बुढीऔँला भुइँमा टेकाउने । अनि, लामो श्वास फेरेर तीन मिनेटसम्म होल्ड गरेर बस्ने गर्नुपर्छ । यसले पेटको मासंपेशीलाई बलियो बनाउँछ । यस्तो अभ्यासलाई फ्लांक भनिन्छ ।
- पेट घटाउनका गरिने अर्को अभ्यास लाइङ लेग राइज हो । भुइँमा सुतेर खुट्टा तल–माथि गर्दै यो अभ्यास गर्न सकिन्छ ।
- उत्तानो पल्टेर खुट्टालाई तलमाथि र यताउति गर्दै सिजर गरिन्छ । यो अभ्यास प्रत्येक चरणमा २० चोटि गर्न सकिन्छ ।
- सुतेर खुट्टा खुम्च्याउने–तान्ने गरेर पनि अभ्यास गर्न सकिन्छ । जसलाई नी–रनसेस भनिन्छ । यो अभ्यास प्रत्येक तीन सेटमा २० पटक गर्नुपर्छ ।
- रसियन–स्विस अभ्यासले पेटको साइटतिरको साइज घटाउन सकिन्छ । खुट्टा खुम्च्याएर बस्ने । अनि, हातको मुठी बाँधेर दायाँ–बायाँ झुक्दै यो अभ्यास गर्न सकिन्छ ।
- साइड प्याक नाइफ नामक अभ्यास एकापट्टि पल्टेर, दायाँ हात टाउको पछाडि राखिन्छ । अनि, बायाँ या हात सीधा राखी आधा शरीर उठाएर अभ्यास गरिन्छ । यो करिब २० पटक गर्न सकिन्छ ।
- हिप राइजमा साइड ज्याक नाइफजस्तै हो । यसमा पनि शरीर माथि उठाउने गरिन्छ । अनि, हिपलाई तल–माथि लगिन्छ ।
- भुइँमा बसेर हात पछाडि टेकी २० पटकसम्म घुँडालाई अगाडि–पछाडि गरेर गरिने अभ्यास निटक क्रन्सेस हो । खासगरी यो अभ्यास शरीर सन्तुलन गर्न र मांशपेसी बलियो बनाउन गरिन्छ ।
- सुतेर खुट्टालाई साइकलजस्तो चलाउने । अनि, हात र टाउको पछाडि राखी कुहिनाले घुँडालाई छुने कोसिस गर्ने । यो बाइसाइकल क्रन्सेस हो ।
- भुइँमा सुतेर खुट्टा र गर्दन एकैचोटि उठाउने । अनि, हातले घुँडा छोएर अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई जिमको भाषामा भिअप क्रन्सेस भनिन्छ ।
- उल्लिखित सबै अभ्यास प्रत्येक हप्ता तीन दिन गर्न सकिन्छ । यसरी दिन बिराएर गर्दा शरीरलाई मेन्टेन गर्न सजिलो हुन्छ । यीबाहेक सिट अप, हाई क्रन्सेस र क्रस क्रन्सेस आदि पनि घरमै गर्न सकिन्छ । सम्पूर्ण अभ्यास सकिएपछि स्टेचिङ गर्न आवश्यक हुन्छ । करिब पाँच मिनेटसम्म ब्याक स्टेचिङ गर्न जरुरी छ ।
काठमाडौँ । तपाईले खाने खाना जसले तपाईं निरोगी बनाउँछ । जब तपाईं जिब्रोको चक्करमा फस्नुहुन्छ, तपाई...
प्रदेश ५ का सांसदलाई डेंगु, बिरामी उपचारका लागि राजधानीमा
काठमाडौं । प्रदेश ५ का सांसद आइपी खरेललाई डेंगु भएपछि उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएको छ । नेकपा बा...
रक्सीसँग भुलेर पनि खानु हुँदैन यी चिज
काठमाडौं । धेरै जसो मानिसहरूले रक्सीसंग शितन खाने गर्छन् । रक्सीसंग शितनमा भुजिया, निम्की, आलू चि...
स्वस्थ रहन नियमित व्यायाम र सन्तुलित भोजन
काठमाडौं । जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्पत्ति नै स्वास्थ्य हो । यदि पैसा हातबाट जान्छ भने त्यसला...
गर्मीमा टाइफाइड किन हुन्छ ? कसरी बच्ने ?
काठमाडौ । अहिलेको यो मौसममा टाइफाइडको डर हुन्छ । टाउको दुख्नुका साथै एकनाससँग ज्वरो पनि आइरहेको छ...
'होल बडी चेकअप’ को नाममा हजारौं रुपैयाँ असुल्दै, १५ देखि २५ हजारसम्म असुली
काठमाडौं । सरकारी तथा निजी अस्पतालले ‘होल बडी चेकअप’को नाममा हजारौं रुपैयाँ असुल्दै आएका छन् । उन...
लोकसेवाले २५ सय कर्मचारीका लागि स्वास्थ्य समूहको विज्ञापन गर्दै
काठमाडौं । सरकारले भदौ अन्तिमसम्म स्वास्थ्य तर्फको लोकसेवा आयोग खुलाउने तयारी शुरु गरेको छ । स्व...
भोलि कृष्ण जन्माष्टमीको सार्वजनिक बिदा
‘पुरुषले भने, ‘नग्न तस्बिरको चार हजार रुपैयाँ दिन्छु’ महिलाले जे पठाइन् त्यो हेर्न लायक
नेपाल वायुसेवा निगमको लिखित परिक्षाको नतिजा सार्वजनिक (नतिजासहित)
शिक्षक महासंघ र मन्त्रालयबिचको वार्ताः इसिडि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब बढ्ने
पहिला प्रेम झुपडीमा एक रात यौनसम्पर्क, दुबैलाई यौन आनन्द आए जीवन साथी
मसाज सेन्टरमा यस्तो धन्दा, ३० मिनेटपछि युवतीले सोध्छिन् सर एक्स्ट्रा...
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा विज्ञापन गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी
शिक्षक सेवा आयोगको अत्यान्त जरुरी सूचना
लोकसेवाको विज्ञापन समावेशी छ, रद्द गर्न आवश्यक छैनः मन्त्री पण्डित